Offline Programmes - YEC Education
ဒီနေ့ခေတ်က ပညာခေတ်ဖြစ်တဲ့ အလျှောက် အပြိုင်အဆိုင်ဖြင့် စီပွားရေးနဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုပညာရပ်ကို လေ့လာနေကြပြီ။ သင့်အနေနဲ့ အချိန်ဆွဲနေတုန်းလား? စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း ဒီနေ့ခေတ်မှာ Marketing, HR, Finance, Management အစရှိတဲ့ စီးပွားရေပညာ လေ့လာစရာများလွန်ရလှသည်။ တကယ်လို့ ဒီပညာရပ်တွေကို စုပေါင်းပြီး Diploma တစ်ခုတည်းမှာ လေ့လာလို့ရနိုင်ရင် မကောင်းဘူးလား? ဒါဆိုအရမ်းကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်ပဲ မဟုတ်လား? ဒါကြောင့် ဘာသာရပ်ခြောက်ခုကို Diploma တစ်ခုတည်းမှာလေ့လာလို့ရတဲ့ DBM Diploma နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
MBA Program ကို လုပ်ငန်းစတင်ဖို့နှင့် စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုမှာ ကျွမ်းကျင်ဖို့ လေ့လာကြပါတယ်။ အချို့ က Career အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ တက်ကြသလို အချို့က Management level ကိုတက်ရောက်ဖို့ တက်ကြပါတယ်။ နောက် networking အတွက်တက်ရောက်ကြသလို လုပ်ငန်းခွင်မှာ နောက်တစ်ဆင့်တက်ရောက်ဖို့ MBA ကိုလေ့လာကြပါတယ်။
MBA ဘွဲ့နဲ့ပဲ ရပ်နေတော့မှာလား? PhD (Management) Why PhD (Management) ? PhD (Management) Program သည် ပါရဂူဘွဲ့ဖြစ်ပြီး၊ မိမိကိုယ်ကို Intellectually challenge လုပ်လို သူများ၊ Management Consulting ကို လုပ်ကိုင်ရာတွင် PhD or Doctor အဖြစ်ဖြစ်လိုသူများနှင့် တက္ကသိုလ်များတွင် Professor အဖြစ် Career တည်ဆောက်ရန် ရည်မှန်းချက်ရှိသူများအတွက်ဖြစ်ပါသည်။ PhD တက်မယ်ဆိုရင် စဉ်းစားသင့်သည့် အချက်များ သုံးနှစ်အချိန်ပေးနိုင်မလားဆိုတာ စဉ်းစားရပါမည်။ နောက်ပြီး Research အတွက် data စုဆောင်းရမည်၊ Analyze လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ Y.E.C Learning Center Y.E.C Learning Center ရဲ့ Mission သည်လူတိုင်းဘဝကို ပညာရေးဖြင့်မြင့်တင်ဖို့ အစဉ်တစိုက်လုပ်ဆောင်သွားဖို့ဖြစ်ပါသည်။